Baarlamaanka Ingiriiska ayaa ka Doodaya in Ciidamada UK ay ka qaybqaataan Duqeynta Siiriya – Radio Muqdisho
Baarlamaanka Ingiriiska ayaa dood ka yeelanaya codsiga ka yimid Raysalwasaare David Cameron oo soo jeediyey in la ansixiyo in ciidamada Britain ay ka qeyb qaataan la dagaalanka ISIS ee dalka Siiriya.
Qorshaha Cameron ayaa daba socda weeraradii bishii hore ka dhacay magaalada Paris, isagoo sheegay in loo baahan yahay in UK ay ka qeyb qaadato la dagaalanka kooxda ISIS ee dalka Siiriya, isagoo sheegay inuu gacan siin doono xulafadooda Maraykanka iyo Faransiiska.
David Cameron ayaa sheegay in hawlgalkan uu ku ekaan doono duqeynta dhanka cirka oo ay diyaaradaha UK la beegsan doonaan xarumaha ISIS ee Siiriya, isagoo meesha ka saaray in wax ciidamo ah dowladiisa u diri doonto Siiriya.
Hase yeeshee inta badan shacabka dalka Ingiriiska ayaa kasoo horjeeda in wadankooda uu ku biiro dalalka ka qeyb qaadanaya dagaalka ka socda dalka Siiriya, iyagoo sheegay in UK ay horey ugu fashilantay weeraradii duulaankii lagu qaaday Afghanistan, Ciraaq iyo Liibiya.
Kumanaan shacab ah ayaa xalay banaanbax ka dhigay bartamaha magaalada London iyagoo socod ku hormaray xarunta xisbiga talada haya, shacabkaasi ayaa ku baaqayey in UK aysan faraha la gelin dagaalka ka socda Siiriya.
Hogaamiyaha mucaaridka UK ee xisbiga Labour party, Mr. Jeremy Corbyn oo isagu sheegay inuu kasoo horjeedo qorshah xukuumada Cameron, balse wuxuu sheegay inuusan xildhibaanada xisbigiisa ka hor istaagi doonini inay codkooda ku taageeraan ansixinta qorshaha xukuumada, arrintan ayaa u muuqata mid uu Mr.Corbyn uga fogaanayo xiisad ka dhex dhalata xisbigiisa oo qaar kamid ah taageersan yihiin la dagaalanka ISIS ee Siiriya.
Qaramada Middoobey oo ka digtey Dhaqdhaqaaqa ISIL-KA Liibiya